Shamarree Tigraay uffata haadha Siqqeen dorgommii miidhaginaa Xaaliyaanitti mo'atte - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Qisaannat Mollaa
Yunivarsitii Haroomayaatti barattuu waggaa duraa taatee ogummaa modeeliingii kan jalqabde shamarreen ganna 23 Qisaannet Mollaa, ''yeroosis uffata aadaa Oromoo Booranaatiin giiftii bareedinaa 'Miss Haromaya University' jedhame'' jetti.
Barattuu Kiliinikaal Narsingii waggaa sadaffaa taatee 'Miss Maqalee' fi erga barnootashee xumurteen booda immoo 'Miss World Ethiopia' taatee turte.
Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti kan dhalatte Qisaannet waltajjii garaagaraa irratti ''uffannaa sabaaf sablammoota garaagaraa uffadheen dhiyaadha'' jetti.
Wal-dorgommiin bareedinaa 'Miss Progress international' jedhamu kaayyoon isaanii dubartooti guddina addunyaa keenyaa irratti hirmaannaa akka qabaatan gochuu dha jetti.
Dorgommicha irratti hirmaachuunis shamarree lammii Itoophiyaa ishee jalqabaa akka taates himti.
''Jalqaba haadholiin dhukkuba Fistullaan otoo hin qabamiin akkamiin irraa ittisuu dandeenya kan jedhuun piroojektii dhiyeesse ilaalaniitu na fudhatan'' jetti
Qissaanet, ''kan ani mo'adhe garuu ramaddii uffannaa aadaa biyyaa filatamaa kan jedhuuni'' jetti.
Kana dura uffannaa aadaa Tigraay, Gondarfi Awwiitiin dorgomtee turte,'' amma immoo maaliifan kan Oromootiin hin dorgomu, dabalataan immoo uffannaa aadaa Arsii kan Haadha Siiqqee nan jaaladha jedheen yaade'' jetti
Dubartiin uffannaa aadaa ittiin dhiyaadhe naa qopheessite waa'ee aadaa Siqqeeefi Sirna Gadaa waan natti himteef, waltajjii dorgommii sana irratti sirrittiin dhiyeesse jetti Qisaannat.
Marga, ulee, coocoo illee otoo hin hanqisiin hundumaa guuteen fudhee dhaqee, uffannichi aadaa durii waan agarsiisuufi sababii calleen baayyee irra jiruuf ulfaataa tahuu isaa baayyee jaalatani jetti.
Haati Siiqqee ulee qabattee baanaan namni lola akka dhaabuufi mirgi dubartootaa akka ittiin kabajamu waltajjii dorgommii ishee irratti akka ibsite nutti himteetti. Sirni Gadaa immoo UNESCO iratti akka galmaa'e yeroon itti himu immoo baayyee dinqisifatan jette.
Aankii Miss Progress international' argachuun dabalata qarshii dhaabbaticha irraa argattu dhukkuba Fistullaa ittisuu dhaaf hojii irra akka oolu dubbatti.
Dubartoota biyyoota garaagaraa irratti dorgommii gosa akkasii mo'atan waliin biyyoota garaagraa irra imaluun akka daawwataniifi namoota sababii garaagaraan miidhaman akka tumsan himtee jirti.
Qisaannet ''namni eenyummaa isaaf ilaacha gaarii qabu anaaf bareedaa dha'' jetti yeroo dorgommiin kuni adeeemsifame illee namummaa kee, ilaalcha biyyaaf qabduufi dalagaawwan gaarii hojjetteen madaalamtas jetti.
Dhalattoota naannoo Tigraay dabalatee namoonni naannoo Oromiyaa fi Amaaraallee injifannoo kootti deebii gaarii naaf kennan jetti shamarreen giiftii bareedinaa kun.
Kana booda dorgommii muraasa qofarratti hirmaattee dhaloota booda ishee dhufuuf iddoo gadhiisuu akk feetu nutti himtee jirti. Yeroo dhihootti immoo giiftiiwwan bareedinaa biyyoota garaagaraa waliin torbee faashinii qopheessuufan jira jetti.
Kanaaf, torbee faashinii qophaa'u hundarratti uffannaawwan aadaa Tigraay, Oromiyaa fi kan warra kaanii illee walitti qabee agarsiisuufi beeksisuun barbaada.
18 Elba 2019